Gburugburu ụwa | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Rubric: Gburugburu ụwa
Kedu aha aha ncheta a? Na-asọpụrụ onye na ihe ọ bụ?
Gịnị bụ aha ihe ncheta a? N’iji kwanyere ya ugwu, kedu ihe kpatara o ji di? Mama Patroness nke Cheboksary, Chuvashia. Ihe ncheta a raara nye nne - “Patroness Mother”. Ihe ncheta a, nke di n’elu ebe di elu nke ndida nke Western site na osimiri, enyefewo…
Kedu asụsụ ndị Filipin na-ekwu?
Kedu asụsụ ndị Filipinos na-asụ? Philippines bụ obodo dị na mpaghara ugwu nke agwaetiti Malay nke mpaghara ọdịda anyanwụ nke mpaghara Eshia n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Oke Osimiri Pasifik. Nke a bụ mba mejupụtara karịa…
Kedu ihe bụ oké ifufe?
Kedu ihe bụ oké ifufe? Kedu mgbe m ga-aga n'ụlọ mposi Serzno? Nke a bụ otu n'ime Tornado cataclysms Tornado bụ ihe omimi, nke dị ka nnu na-agba ọsọ ngwa ngwa ruo 1,5 kilomita n'ịdị elu, na-apụta site na égbè eluigwe ...
olee mba bụ Angel Falls?
Kedu mba nke Angel Falls dị? Angelfall Water (mmụọ ozi) ma ọ bụ mmụọ ozi (Salto Angel) Waterfall (mmụọ ozi) ma ọ bụ mmụọ ozi nke (Salto Angel) - oke mmiri na-ada ada na ụwa ...
Ebee ka Ugwu Mashuk dị?
Ebee ka Ugwu Mashuk dị? Mashuk bụ ama maka ihe abụọ: ha gbara Lermontov n'ebe ahụ (ya bụ onye na-ede uri) ma megide ọdịda ya Misha Galustyan sitere na Rashi anyị dị ka telivishọn bụ Pyatigorsk. Ọfọn ...
ebee ka osisi poplar atọ a ma ama na ivy?
ebee ka osisi poplar atọ a ma ama na ivy? Ihe nkiri a dabeere na akụkọ dị mkpirikpi site na Alexander Borschagovsky Pọọpọ atọ dị na Shabolovka, nke e bipụtara n'August 1966 na magazin Ogonek. Na ...
Montenegro dị na mba dị aṅaa? Europe
Montenegro dị na mba dị aṅaa? Europe Montenegro bụ onye bụbu Yugoslav Republic, ugbu a bụ obodo nwere onwe ya. Black # 769 bụ ala dị n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Europe, na adriatic n'ụsọ oké osimiri Balkan. Osimiri Adriatic asacha, nwere ala ala na ...
Ebee ka nke a na agwọ?
Ebee ka nke a na agwọ? Ọ dị ka nchịkọta na ihe mere xs, t. Na agwọ ahụ niile nsi ọma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile. GORILKA NA SNAKE POISON. A na-etinye ya n'ime ya. Ntak naanị nne di ya ...
Mee ka obodo ndị dị iche iche mara mma
Gwa m aha mara mma nke obodo si n’akụkụ ụwa niile Philippines Pattaya - aha obodo ahụ pụtara na ikuku na-efe tupu mmalite mmiri. Onye Barcelona, ​​Sant Moritz. Rome, Venice, St. Petersburg, Moscow Monte Carlo, Rio de Janeiro, Sao Paulo. amara ale ...
Achọrọ M 10 nke kasị ukwuu na 10 nke mba kachasị nta na usoro ọnụ ọgụgụ.
Achọrọ M 10 nke kasị ukwuu na 10 nke mba kachasị nta na usoro ọnụ ọgụgụ. Ihe niile doro anya na ọ gaghị adabara http://en.wikipedia.org/wiki/List_Stand_Akwado nke kachasị nta: Ebe 10: Saint Kitts na Nevis (banyere obodo a, lee n'elu).
Ebee ka ndị enyi a si? Kedu ụdị mba? N'ime afọ ole?
Ebee ka ndị enyi a si? Kedu ụdị mba? N'ime afọ ole? A na-ekpo ọkụ na Kuskovo na Ostankino na Poland! Olga Maschna mere na ya ...
Ọnọdụ ihu igwe Afrika.
Ọnọdụ ihu igwe Afrika. Ihe ka ukwuu n'ime kọntinent ahụ dị n'agbata ógbè abụọ ahụ. Ugboro abụọ kwa afọ, Sun na ebe ndị a n'ehihie dị na zenith, ọnọdụ ya kachasị elu nke ehihie bụ banyere nke a ...
ebee ka Sevastopol nọ?
Ebee ka Sevastopol dị? Na mbara ala ụwa N'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke agwaetiti Crimea. ke Crimea Na ọnwa na oké osimiri nke Bur ... Ukraine. Crimea Sevasto # 769; pol (Sevastopol nke Ukraine, Crimean Tatar. Aqyar) bụ obodo amaala obodo Ukraine,…
Kedu ụdị osisi dị na mpaghara nke Krasnoyarsk? Kedu ụdị osisi dị na mpaghara nke Krasnoyarsk?
Kedu ụdị osisi dị na mpaghara nke Krasnoyarsk? Kedu ụdị osisi dị na mpaghara nke Krasnoyarsk? Ógbè ndị Krasnoyarsk nwere ọgaranya na ihe onwunwe ike. N'ihi nke a, e kere nnukwu mgbagwoju anya na mpaghara: Krasnoyarsk ...
Osimiri kacha ukwuu n'ụwa?
The kasị ibu ọdọ ke ererimbot? 1 1 = Caspian more376 0001 0252 = Verhnee82 1004061833 = Viktoriya68 100801 1344 = Guron60 0002291775 = Michigan57 8002811776 = Aral more51 10055537 = Tanganika32 9001 4707738 = Baykal31 5001 6204559 = Bol. Medvezhe31 32644611910 30 = = Nyasa80072647211 Bol. Nevolniche28 56861415612 = Eri25 = 6676417413 = Vinnipeg24 3871821714 22 = = Balhash0002634215 Ontario19 ...
Kedu ka ị ga-esi agagharị gburugburu ụwa, ma ọ bụrụ na ị nọ n'oké ọhịa?
Etu ị gagharị na ụwa ma ọ bụrụ na ị nọ n'oké ọhịa? okafish.ru/grib/orientir.htm anwụinat.ru/category/article/orientation/ Ana m eduzi lichens n'ime oke ọhịa (nna m ochie kuziri ya na nwata), ihe ọ bụla dị ala O nwere ọtụtụ ụzọ…
ebee ka Pamir dị? na ụdị ndị mmadụ bi na ya?
Ebee ka ugwu ahụ dị? na ụdị mmadụ bi na ya? Na pomirandi, Pamyrans bikwa obodo a n'otu n'otu - nke a bụ n'azụ ụlọ ọba akwụkwọ etiti na shelf n'okpuru aha "ọdịdị ala"! Ndị dị na Pamirs ...
Chọbaa na ego arịgoro na Oge Ochie, lee.
Hazie ego ahụ na Russia oge ochie na-arịgo n'usoro, lee Kuna (mkpụrụ ego) - ngalaba ego nke Ancient Russia, mkpụrụ ego ọla ọcha. N'oge agha, Kọọki pụtara akpụkpọ nke marten, nke e jiri gbanwere dị ka…
Kedu ụzọ kachasị mfe iji mụta amaokwu nke ivan bunin bilie
ihe kachasị mfe iji mụta amaokwu nke ivan bunin na-enwe mmetụta, ịghọta, banye n'ime ya, mgbe ahụ ọ ga-adị mfe ịkụziri) Ivan Bunin Rose bụ poem kasị sie ike ma ọ dị mkpa idobe n'amaokwu a ...
Kedu mgbe na kedu ka m ga - ahụ ma amịpụta ngwa ngwa na Holland Netherlands?
Kedu mgbe na kedu ka m ga - ahụ ma amịpụta ngwa ngwa na Holland Netherlands? Ọ bụrụ na maka ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mgbe ahụ n'oge ọ bụla n'afọ. Na Eprel, na okike ... Ọ bụrụ na opupu bụ mmalite, mgbe ahụ…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,354.